Highland Fayre Xeerarka kuubanka
10% Ka Bixi Iibsashadaada Koowaad Macaamiisha Cusub Ku saabsan Highland Fayre. Waxaan helnay 6 rasiidh oo firfircoon oo shaqeynaya Highland Fayre. Xubnaheennu waxay kaydiyaan lacag iyagoo adeegsanaya lambarradan qiimo -jaban ee highlandfayre.co.uk marka la bixinayo. Dalabka ugu sarreeya ee Highland Fayre ee maanta ayaa ah Ka -qaadis 10% Marka aad Isticmaalayso Xeerkan; Nambarka kuuboon Highland Fayre ee ugu fiican ayaa ku badbaadin doona 30%
20% Ka Bax Goobta Highland Fayre waa tafaariiqleyaasha Hadiyadaha iyo Aruurinta oo caan ah iyo mareegta highlandfayre.co.uk waa dukaankeeda internetka. Ka faa'iidayso koodhadhka ku -darka iyo dallacsiinta Highland Fayre ee boggan ku taxan dhammaan tigidhada ugu sarreeya uguna dambeeyay ee Highland Fayre waxayna soo bandhigaysaa inay keydiso weyn.
10% Ka Bax Goobta Kaydso ilaa 10% OFF oo leh koodhkan kuuban fayre sare ee sare, koodhka xayeysiinta ee highlandfayre.co.uk iyo foojarka kale ee dhimista. Waxaa jira 17 rasiidh highlandfayre.co.uk oo la heli karo Ogosto 2021.